Sevha nzvimbo pane yako iPhone uye iPad nekuda kweIOS 11 | IPhone nhau
Apple nyowani yekushandisa sisitimu iri padhuze nekona, uye kune avo vane zvishandiso zvine mashoma mashoma ekuchengetedza inhau inhau huru, nekuti iOS 11 inounza maturusi akati wandei uye sarudzo dzekumisikidza dzino bvumidza iwe kuchengetedza nzvimbo pane chako chishandiso uye svina zvishoma kubva panzvimbo yako yekuchengetera.
Zvishandiso kuti uone zvauri kushandisa yako yemahara nzvimbo pane, sarudzo dzinozo bvisa otomatiki kunyorera kwausingashandise, mavhidhiyo matsva uye mafomati mafoto, nyowani yekuchengetedza gore sarudzo ... kune maturusi mazhinji anoiswa neApple kuchengetedza nzvimbo uye isu tinokuudza iwe kuti iwe ugone kuzvishandisa kubva pazuva rekutanga iro iOS 11 inowanikwa.
1 Bvisa maapuro ausingashandise
2 Kurudziro yekusunungura nzvimbo
3 Mavhidhiyo matsva uye mafomati mafoto
Bvisa maapuro ausingashandise
Une mashandisiro mangani pane yako iPhone kana iPad? Uye vangani vaunonyatsoshandisa? Chokwadi iwe une maapplication akaisirwa iwe ausina kushandisa kwemwedzi, uye mamwe acho anogona kutora zvinopfuura 1GB, nzvimbo yakakosha iyo inogona kubatsira kune mamwe mabasa anobatsira. iOS 11 ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti ubvise iwo maapplication nekuti kana iwe uchinge wapererwa nenzvimbo ichaona kuti ndeapi mashandisirwo anoshandiswa uye ichaabvisa iwo kubva kune yako kifaa kukupa iwe mashoma ekuwedzera megabytes. Iwe haufanire kunetseka nekuti iyo data haizobviswa, saka kana iwe uchizoida zvakare iwe uchafanirwa chete kuitora kubva kuApp Store uye ichave iine zvese zvirimo sezvayakanga iri isati yabviswa. Iwe une iyi sarudzo mukati meZvirongwa> Zvakajairika> Kuchengetwa kwe iPhone kana mukati meZvirongwa> iTunes Chitoro neApp Store.
Kurudziro yekusunungura nzvimbo
iOS 11 ichaitawo mazano ekuti iwe ushandise zvishandiso zviripo kuti zvikubatsire kusunungura nzvimbo pane yako kifaa, mune dzakawanda kesi uchishandisa iCloud chengetedzo. Mukati meZvirongwa> Kuchengetwa kweiyo iPhone iwe unowana girafu mauri iwe unogona kuona izvo zviri kutora nzvimbo yeyako kifaa, uye pazasi chete pane akateedzana ezvekurudziro izvo zvinowedzera iyo yemahara nzvimbo. Shandisa iCloud Photo Library, isina chinhu Yakadzimwa Mifananidzo dhairekitori, wongorora mafaira makuru muMessage, kana shandisa Meseji muICloud aya ndiwo mazano anowanzoonekwa, pamusoro pekukuudza kuti maapplication anotora yakawanda nzvimbo pane yako iPhone kana iwe uchifarira kudzima chero.
Mavhidhiyo matsva uye mafomati mafoto
Iye zvino mifananidzo yaunotora ne iPhone yako haizochengetwe muJPEG fomati asi mune itsva HEIF. Usavhunduke nekuti iyi haisi nzira nyowani yaApple yekuchengetedza mapikicha, asi hutsva hutsva hunovandudzika paJPEG uye huchakurumidza kuve hwakapararira seJPEG. Kwete chete iyo inopa yemhando yepamusoro mapikicha, asi ivo zvakare vachatora mashoma nzvimbo Zvinogona kutaurwa kuti nehunhu hwakafanana iwo mafoto anotora hafu iyo mune yeJPEG vhezheni, inova budiriro. Chimwe chinhu chakafanana chinoitika nemavhidhiyo, ayo zvino achachengetwa muHEVC fomati, yakanakira mavhidhiyo akanyorwa mu4K mhando. Ivo vanotora 40% zvishoma, saka hauchafanirwe kutya kumisikidza iyo 4K sarudzo yeiyo iPhone kamera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Sevha nzvimbo pane yako iPhone ne iPad nekuda kweIOS 11
Mhoroi, ko vhidhiyo fomati muhevc (h265) uye mapikicha heif, ichave ichibva kune yeruzhinji ios 11 vhezheni?
ine ios 11 beta 7 Ndichiri kusevha mavhidhiyo ari h264 pane iphone 7.
Apple inotanga kubvisa maapplication kubva kuIrish Developers 'App Store
Google Glass haina kufa